Portrait Elysé | Grandir à Antsirabe
Nanomboka ny taona 2013 i Elisée no niasa teto amin’ny Grandir à Antsirabe. Miandraikitra ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanana ara-bola izy. Andeha ary ho fantarintsika eto ambany ny anjara asany, ny momba azy ary ny maha izy azy.
Elisée, afaka mba soritsoritanao aminay ve ny lalana efa nizoranao ?
Niasa eritaona mahery tamina ONG miasa ho an’ny fahasalamana ara-pananahan’ny tanora aho. Taorian’izay dia voaray ho mpitantana mpanampy, sady nandrindra ny ara-taratasy no nitantana ihany koa ny ara-bola. Anjara andraikitro nisongadina tamin’izany ny fanaovana ny fafana Excel izay ahafahana mamaritra amin’ny fomba tsotra ny haben’ny vato, fasika, … ilaina amin’ny asa fanorenanana foto-drafitrasa maro. Asa izay tsy dia nety tamiko loatra io.
Dia rehefa tonga teto amin’ny Grandir à Antsirabe…
Izay indrindra, tamin’ny 2013. Taona ray taorian’io dia nahazo ny mari-pahaizana momba ny fitantanana aho. Mahakasika indrindra ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa sy ny fandaminana ny « visa de courtoisie » an’ireo mpilatsaka antsirapo sy ireo mpanao « services civiques » ny asako. Andraikitro ihany koa ny manara-maso tetikasa sasantsasany toy ny fanorenana ny « Centre d’Hébergement Temporaire ». Amin’ny maha mpiandraikitra ny fitantanan-draharaha ny tenako dia ao anatin’ny asako ny fanaraha-maso ireo taratasy ara-panjakana, ny fanambarana ara-tsôsialy sy ny hetra. Misy fotoana ihany koa aho manampy ny mpandrafitra raha ilaina.
Tamin’ny 2015, efa niandraikitra ny fanaraha-maso asa fanorenana lehibe iray enao…
Ie, tena nametraka tsiaro tsara maro ho ahy mihintsy izay. Izaho mantsy tamin’izany no tompon’andraikitra voalohany tamin’ny fananganana ny sekoly ambaratonga fototra (EPP) eny Miaramasoandro. Voalohany tamin’ny fiainako tamin’izany ny hoe nanangana zavatra hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany, mipetraka ho tantara ho ahy mihintsy iny !
Manao ahoana ny ahitanao ny ho avin’ny fikambanana ?
Tiako hoe hanokanantsika fotoana bebe kokoa ireo ankizin’ny lalana. Eo ihany koa ny tokony hanampiantsika azy ireo hahita ny lalana ombany eo amin’ny fiainana sy izay ho asany any aoriana, ao anatin’izany koa ny fampifandraisana azy ireo amin’ny fianakaviany indray. Ireo ankizy ireo mantsy no ho avin’ny firenena !
Raha biby aho dia « dauphin » amin’izy ireny tsy tia sehoseho. Sady tia manampy ny olona tra-doza izy no manana ilay toetra tia miombina sy tia mamonjy izay itoviako aminy.
Ary raha « héros » ianao ?
Ilay « héros » an’ilay horon-tsary mitohy amerikana Person of Interest : Reese. Mpiasa taloha tao amin’ny CIA izay noheverina ho maty izy, avy eo dia nampiasana olona manan-karena iray ka namorona « logiciel » iray ahafahana mamantatra izay olona voarohirohy anaty asa ratsy isan’andro. Anjaran’i Reese avy eo no manao ny fanadihadihana sy miaro izay olona ho vonona. « Héros » iray izay miafinafina nefa miaro ny tsy manan-tsiny.
Ary raha hira ?
Dia HiraGasy. Vakoka Malagasy izy io sady mifono fahendrana sy mitahiry ny fomba ama-panao ny firenana. Tena ankafiziko !
Ny toetra tsaranao ary e ?
Ary ny toetra ratsy ?
Tsy dia ahitan-teny, mangina
Raha teny filamatra ?
Ny tena tiako dia ilay hoe : « S’unir pour bâtir, c’est grandir ensemble ».
Nisy lehilahy manam-pahendrena izay namerimberina tamiko foana hoe mila mametraka marika eto an-tany isika amin’ny fandalovana eto, ny fiainana mantsy mandalo dia miserana
Mino aho fa efa nanomboka nametraka marika ianao amin’ny asanao eto amin’ny fikambanana. (hehy)
MG	Ara-dalana #3 : mozika sy dihy, ankizin’ny C…